Ukuvuselelwa kwesikhumba ezungeze amehlo: izindlela ezingcono kakhulu
Izinguquko zomdala zibonakala kakhulu endaweni yamehlo. Izimpawu zokuqala zalezi zinguquko zibonakaliswa: imibimbi, ukwehla kwesokunxele esikhumbeni, izikhwama nokuzikhukhumeza, i-hernia yamahlombe aphansi naphansi, imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo.
Ngokuvamile lezi zinkinga zihlobene. Konke kuqala ngokunciphisa ukuqina kwekhanda nokubukeka kwezinto eziqhubekayo ezincane ezincane eziseduze kwamehlo. Uma isikhumba silahlekelwa ukuqina kwayo, siqala ukugoba. Ngenxa yalokho, umngcele ophakathi kwehlathi kanye nesokhehlo kweso kuguqulwa phansi, futhi amehlo aqala ukubheka asebekhulile ngenxa yokuthi izicubu ezithambile azihlanganisi izingxenyana ezansi zeso. Ezimpawu zokuqala zokuguqula ukuguga, kuyadingeka ukuthi uthathe isinyathelo ngokushesha, ngoba uma isikhumba sishintshe kakhulu, khona-ke singalungiswa kuphela ngokuhlinzwa.
Ukuvuselelwa kwesikhumba ezungeze amehlo kuqala ngokubuyiselwa kokuqina kwawo, ukuvuselelwa kwe-cell exchange kanye nokuqinisa uhlaka lwamasipha. Njengomthetho, izazi ze-cosmetologists zikhetha izindlela zokuvuselelwa ngabanye, ngokususelwa kunhlobo lesikhumba nezinkinga ezikhona.
Inkinga 1. Ama-moles azungeze amehlo
Imibimbi ezungeze amehlo isusizwa kakhulu ngamajova we-botulinum toxin (i-Dysport noma i-Botox). Lena inqubo esheshayo okumelwe yenziwe kanye. Umphumela ubonakala ezinsukwini ezimbalwa - ezinsukwini ezingu-2-14. Umphumela uhlala izinyanga ezingu-8. Uma ujwayele ukukhukhumeza, khona-ke ngaphambi kwenkambiso enjalo kubalulekile ukuqhuba inkambo ye-apparatus cosmetology ukuqeda i-edema. Ukuze kuthuthukiswe ukusakazwa kwe-lymph negazi, kutuswa ukuba ufunde izifundo ze-mesotherapy.
Kubalulekile ukuthola inkosi enhle. Ama-wrinkles kufanele asuswe ngendlela efanele ukuze angabonisi kwezinye izindawo. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukunikeza amashiya isikhundla esilungile, ukugcina izinkulumo zobuso. Ukuze wenze lokhu, udinga ukukhetha iphuzu elifanele lokusungulwa kwe-Botox. Ngokuvamile izindlela ezisetshenzisiwe nezengeziwe, isibonelo, i-cosmetology ye-hardware.
Inkinga 2. Ukunciphisa ukuqina kwekhanda nokuguqulwa komzimba
Ukwandisa ukuqina kwesikhumba, ukuqeda imibimbi emihle nokuqeda ukuchithwa kwegazi kungahlanganisa izinqubo: i-mesotherapy, i-chemical peeling, i-biorevitalization. I-Mesotherapy kusuka ku-biorevitalization ihlukaniswa kuphela izidakamizwa ezisetshenzisiwe. Ngendlela yesibili, i-hyaluronic acid ijojowe nge-molecule ye-scleral, ngenxa yalokhu ihlala isikhathi eside ngaphansi kwesikhumba futhi inomphumela wokuvuselela ohlala njalo.
I-Biorevitalization yenziwa ngemva kokukhishwa ngesonto kamuva. Ukuze uzuze imiphumela emihle, indlela engcono kakhulu ukuqhuba izinqubo ezine zokupenda, kanye nezidakamizwa ezine. Kulokhu kubaluleke kakhulu ukushintsha phakathi kwabo ngesonto elilodwa.
Ukuvuselela isikhumba eseduze kwamehlo, kubalulekile ukusebenzisa kuphela lezo zidakamizwa ezenzelwe ngqo le ndawo. Lokhu ngeke kuthuthukise kuphela ukusebenza kahle kwezinqubo, kodwa futhi kuzokwenza kube ngokomzimba ngangokunokwenzeka. Namuhla, elinye lamalungiselelo amahle kunazo zonke i-biorevitalization yisisetshenziswa esisekelwe ku-hyaluronic acid - i-Viscoderm 0,8. Lesi sidakamizwa sakhiwe ngokukhethekile ezindaweni ezibucayi futhi ngemva kwalokho akuvamile ukugeleza, okubaluleke kakhulu. Isidakamizwa sijojowe ngamaconsi amakhulu, ngakho isikhumba singalimala kangako.
Ngesikhumba esizungezile amehlo, kungcono ukusebenzisa umuthi we-Enerpil El. Ekubunjweni kwalo kuhlanganisa inhlanganisela ye-trichloroacetic ne-lactic acids, enomphumela omuhle futhi owehlisayo. Lezi zidakamizwa zisetshenziswa ezincane zokunciphisa ingozi yokuthukuthela. Nokho, ngokuhlanganisa la mathuluzi, umphumela oyifunayo uyatholakala. Ekukhiqizeni ukuhlunga, ubuchwepheshe bokuthi "ukukhishwa kancane kancane" kwezinto ezisebenzayo kusetshenzisiwe. Ngakho-ke, ngemuva kwenqubo, isikhumba sishaywa kancane futhi lokhu cishe kungabonakali. Ukukhanda isikhumba kuqala ngosuku lwesibili futhi kuphelile ngosuku lwesine kuya kweyisihlanu emva kwenqubo yokuqala. Ngemuva kwezinqubo eziphindaphindiwe, inqubo yokuhlunga ihamba ngokushesha.
Inkinga 3. "Izikhwama" ngaphansi kwamehlo, ukukhukhumeza
"Amasaka" ngaphansi kwamehlo avela kwabesifazane abaningi. Ngezinye izikhathi zivela ngenxa yokukhathala okujwayelekile nokuntula kokulala, kodwa zidlula ngokwabo. Futhi ngezinye izikhathi zibonakala ngenxa yenguquko yobudala. Ukuqeda le nkinga, i-cosmetologists iyanconywa ukuba yenza i-massage ye-hardware Phakamisa-6. Kunconywa ukuthi ukuhlanganiswe ne-micro-therapy ukuze ususe ukulimala futhi uqinise isikhumba. Umphumela ubonakala ngemuva kwezinqubo ezimbili noma ezintathu. Noma kunjalo, ukuze uthole umphumela ohlala njalo, udinga ukuhamba ngezinqubo eziyishumi kuya kwezinhlanu. Isikhathi esiphakathi kwezinqubo kufanele sibe ngesilinganiso kwezinsuku ezimbili. Izinqubo eziyinkimbinkimbi ze-bio-therapy I-Bio Gold ne-massage ye-hardware Phakamisa 6 induduzo enkulu futhi ingathathi ngaphezu kwehora.
Inkinga 4. Umdwebo ongenalutho
Lokhu kuguquka kwenkathi kwenzeka kaningi - umgodi odlula ekhoneni langaphakathi leso ngokungahambi kahle esihlathini. Kubonakala ngenxa yokwehliswa kwesikhumba phansi nokuguquka kweminyaka. Ungayilahla usebenzisa ama-gel asekelwe ku-collagen ne-hyaluronic acid. Le nqubo iphumelela kakhulu. Gcwalisa i-fissure engekho emthethweni nokubuyiselwa ubuso ubuso obuneminyaka emihlanu kuya kweyishumi. Le nqubo ivame ukungabi nabuhlungu futhi iyashesha. Imiphumela igcinwa kuze kube unyaka.
Inkinga 5. Hernia wejwabu leso eliphezulu nelincane
Kunezindlela ezimbili zokuqeda le nkinga. Uma inkinga ingakhulumi kahle, khona-ke bayasakaza ama-gels asekelwe ku-collagen ne-hyaluronic acid. Uma inkinga iboniswa ngokucacile, i-hernia ingasuswa kuphela nge-plastiki yokuhlinzwa - i-blepharoplasty. Uma kunqunyelwe ukusebenzisa ukuhlinzwa kwepulasitiki, kuyadingeka ukuyilungiselela. Kusengaphambili kudingekile ukuqhuba ukuqeqeshwa kokwelapha ngosizo lwezindlela ze-cosmetology. Lokhu akugcini nje ekunciphiseni ingozi yezinkinga, kodwa futhi kuthuthukisa inqubo yokuphulukisa ngesikhathi sokusebenza emva kwesikhathi.
Inkinga 6. Imibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo
Okuhle kunazo zonke ukusuka emibuthaneni emnyama ngaphansi kwamehlo kunciphisa inkambo ye-ozone-oxygen therapy. Kungcono ukuhamba ngezinqubo eziyisikhombisa kuya kweziyishumi nanhlanu. Le nqubo ikhulisa ukuqina kwesikhumba samehlo, ivuselele ubuso, ngemuva kokuba amehlo athola ukucaca nokukhanya. Ngendlela, le nqubo i-beauticians incoma ukuthi idlule isikhathi ngasinye kubo bonke amantombazane nganoma yisiphi isikhathi, ikakhulukazi labo abanezintambo ezincane noma ababhemayo.
Abesifazane abaningi baphendukela ku-cosmetologist kuphela uma izinguquko zesikhathi seminyaka sezivele zisho. Kodwa-ke, uma beqhubeka bebonisa, kunzima kakhulu ukuwabulala. Ezimweni eziphambili, ukuhlinzwa kuphela kwepulasitiki kulungile. Ngakho-ke, kubalulekile ukuqonda ukuthi ngokushesha uqala ukuvakashela i-beautician, kungcono. Namuhla, isayensi ayimi. Futhi izinqubo eziningi zokuqhakambisa ukuvuselelwa kwesikhumba zenzelwe. Ukubhekana ne-cosmetian kuyadingeka njalo kusukela eminyakeni engu-25. Uyokuhlakulela uhlelo olulodwa lokuvimbela ukuguga. Ekuthuthukiseni uhlelo olunjalo, i-cosmetologist iqaphelisisa izici zesimo sobuso. Phela, intombazane ngayinye inezinkinga zayo: abanye banemibuthano emnyama ngaphansi kwamehlo akhe, abanye banenhlanzi, kanti abanye banamaphiko.
I-Experiencedkosmetologist ngokushesha ikwazi ukubona zonke izindawo zakho zenkinga. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi bheka ubuchwepheshe obuhle.
Indlela yokuvuselela isikhumba nokuqeda ukuvuvukala phansi kwamehlo?
Ngaphansi kokuvikelwa kwe-edelweiss: umugqa wemikhiqizo yokulwa nokuguga uHelena Rubinstein Prodigy Reversis
Berry futhi: i-series entsha yokuguga i-Resveratrol Lift esuka eCaudalie
Ubuso kusukela kulesi sikhwama: Izithandani zobumnandi be-Autumn for Care Facial
I-Mesoroller ngobuhle bobuso bakho
Ukwelashwa kwesikhumba samafutha ngamafutha abalulekile
Imaski ebusweni ngamafutha e-linseed
Ukwakha - ukuqeqeshwa kwemisipha yendawo eseduze
Izinwele ezinama-curly ezithambile: izinketho ezimbalwa ezilula
Izinkukhu zezinkukhu zasolwandle zasolwandle
Ukuthuthukiswa kwezinsana ngonyaka ongu-1 wokuphila
Indlela yokuhlukanisa imini kusihlwa
I-borsch ebusika yaseLithuania "Shaltibarschy"
Yeka ukuthi ukushisa kwelanga nenyanga kuzothinta kanjani izimpawu ze-Zodiac ngo-2018: Ulwazi olubalulekile
Emaphethelweni e-"shuhera" enkulu: umkhiqizi we "House-2" u-Alexei Mikhailovsky waxoshwa kule projekthi
Izakhiwo ezintsha ezishabalalayo noma izindlu zokuqothula ukuzibulala
Yiziphi izilwane ezifuywayo ezifanele i-horoscope
Indlela yokufunda ukuba nomphakathi futhi ukhulume?
Izimpawu nokuphathwa kwe-diaper dermatitis
Izinkinga zomzwelo zabazali nezingane
Ukupheka okulula kwama-saladi okumnandi
I-SMS ngoFebhuwari 23 - emfushane futhi ehlekisayo, ejabulisa ukuthokozisa indoda yakho ethandekayo nomngane on Day Defender of the Fatherland